October 8, 2020 October 8, 2020 adminLeaveaComment on जुन बाटो बनाउँदा घु`स खाए..,त्यही बाटोमा गाडी पल्टेर नेताले ज्या`न गु`माए…
काठमाण्डौं । सडक सञ्जालले गाउँ गाउँ जोड्ने अहिले अभियान नै चलेको छ । अझ कमसल पहाडमा डोजरले खन्दा त झन पहि’रोको जो’खिम पनि हुने गरेको छ । यस्तै घ`टना जाजरकोटमा भएको छ । जिल्लाको जुनिचाँदे–१ लोड्नीदेखि मजकोटसम्मको सडक निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग नेताले कमि`सन आएको आ`रोप लागेको छ ।
कमि,सनको लोभमा मापद,ण्डविप,रीत निर्माण भएको सडकमा भएको दुर्घ`टनामा वडा अध्यक्ष लगायत स्वास्थ्यकर्मीको समेत ज्या,न गएको छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले सडक कम,सल रहेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका पनि वा`स्ता गरिएको थिएन ।
यस्तो कुरा उठाउँदा, उठाउँदै यसै सडकको एकै ठाउँमा दुई पटक जिप दुर्घ`टना हुँदा आठजनाको ज्या`न गइ`सकेको छ । ज्यान गुमा`एका परिवारका आफन्तले नेताले घु`स खाएर बाटो बिगा`रेको र त्यसमा आफन्तले ज्या,न गुमा`उनु परेको भन्दै आ क्रो श ब्यक्त गरेका छन् ।
अहिले घट`नास्थल त ना व ग्रस्त भएको बुझिएको छ । जुनिचाँदे–१ लोड्नीदेखि मजकोटसम्मको सडक निर्माण गर्दा व्यवसायीले डोजर चालकलाई इञ्जिनीयर बनाएर सडक खनेका थिए । अघिल्लो वर्ष मात्र खनिएको सो सडकमा जिप चल्नै नसक्ने भएपछि गाउँपालिकाले समेत केही रकम विनियो`जन गरी सडकलाई केही सजिलो बनाएको थियो ।
जुनिचाँदे गाउँपालिका–१ औलमा बुधबार बेलुकी भे १ ज ९३५ नम्बरको जिप दुर्घ`टना हुँदा छ जनाको नि`ध`न भएको थियो । ज्या`न गुमा`उनेमा वडा नं ११ का वडाध्यक्ष ५० वर्षीय अमरबहादुर शाही, ६० वर्षीया कृति शाही, ३२ वर्षीय खेमबहादुर शाही, वडा नं ५ की ३० वर्षीया मालिका बस्नेत, २९ वर्षीय कृष्णबहादुर शाही र लालबहादुर बुढा रहेको बताइएको छ । छेडागाड नगरपालिका–५ का कर्णबहादुर शाहीको परि,चान खुलेको छ । चालक गोरखबहादुर बस्नेत सम्पर्कमा नरहेको बताइन्छ !
सरकार र डा. केसी पक्षबीच वार्ता सकारात्मक, वार्ता साँझ पुनः बस्ने गरी स्थगित